မြန်မာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးလက်ရှိအခြေအနေ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now) ● ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုအပြီး ဘာသာနှစ်ခုကြား ပိုမိုစည်းလုံး၊ ညီညွတ်လာ
ကိုသန်းလွင် - ခြစားခြင်း
Myanmar Now - ၁၉၆၂ နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး ဒီမိုကရေစီနည်းကျ သမ္မတကို လွှတ်တော်က ရွေးချယ်
မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် - Aung Din
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၂
အာစီယံ၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ သည် ယခုခေတ်ကျမှသာ စီးပွားရေးပါ၊ ပူးပေါင်းမှဖြစ်တော့မည်ဟု ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်လာကြသည်။ အဓိကမှာ တရုတ်၏ တဟုန်ထိုးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့် အမေရိကန်၏အကျိုးစီးပွားများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) ယိုးဒယားဟု ခေါ်ကြသည်။ ထိုင်းလူမျိုးတို့က သူတို့နိုင်ငံက ဆိုင်ယမ် Siam ဟုခေါ်ကြသည်။ မြန်မာကို Burma ဘားမားဟု ခေါ်ကြသော်လည်း မြန်မာတို့က Myanmar ဟု မိမိအသံထွက်အတိုင်း ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုကြသည်။ ၁၂၃၈ ခုနှစ်မှ ထိုင်းလူမျိုး များက မူလအုပ်စိုးသူ ခမာများကို အနိုင်ယူပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ မြန်မာများက ပိုစောသည်။ ၁၀၄၄ တွင် မူလနေထိုင်သူ၊ ပျူနှင့် မွန်များကိုအနိုင်ယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံ (ပုဂံမင်းဆက်) ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုင်းနှင့်မြန်မာ လူမျိုး ၂ မျိုးသည် ယခင်က တရုတ်နိုင်ငံတွင် ယန်စီမြစ်ဝှမ်းတွင်နေထိုင်ပြီး နန်ကျောက်နိုင်ငံထူထောင်အခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် နယ်မြေတိုက်ပွဲများမှ အောက်ပိုင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့သည်။ မြန်မာများက ဦးစွာနေရာယူထားသောကြောင့် ခမာအင်ပါယာတွင် သွားရောက်အခြေစိုက်ရင်း၊ ခမာအင်ပါယာ ကျဆုံးသောအခါ၊ ထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
မြန်မာနှင့်ထိုင်း ၂ နိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဓလေ့စရိုက်များ ဆင်တူကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံအားလုံး ဥရောပနယ်ချဲ့များ လက်အောက်ရောက်ခဲ့သော်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။
မြန်မာဘုရင်များသည် သြဇာအာဏာကြီးမားလာသောအခါ၊ ထိုင်းနိုင်ငံကို စစ်ချီတိုက်ခိုက်လေ့ရှိသည်။ တပင်ရွှေထီး၊ ဘုရင့်နောင်၊ နန္ဒဘု ရင်၊ အလောင်းဘုရားနှင့်ကုန်းဘောင်ဘုရင်များဖြစ်သော နောင်တော်ကြီး၊ ဆင်ဖြူရှင်၊ ဘိုးတော်ဘုရား၊ ဘကြီးတော်ဘုရား စသည့် မြန်မာဘုရင်များသည် ထိုင်းနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်ကြသည်။ ဘုရင့်နောင် (၁၅၆၃-၆၉)၊ နှင့်ဆင်ဖြူရှင် (၁၇၆၅-၆၇) တို့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အယုဒ္ဓယ မြို့တော်ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း၊ ကြာကြာထိမ်းမထားနိုင်ကြပေ။ ဆင်ဖြူရှင်သည် ၁၇၆၇ တွင် အယုဒ္ဓယမြို့တော်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီး၊ မြေလှန်ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် တရုတ်တပ်များက အထက်မြန်မာပြည်သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာကြသည်။ တရုတ်-မြန်မာစစ်ပွဲ ၃ ကြိမ်တိုင် တရုတ်တပ်များကို အနိုင်ရအောင်တိုက်ရသောကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပြန်လည်တွန်းလှန်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ခေတ္တခဏသာ မြန်မာ များ ထိုင်းနိုင်ငံကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ မြန်မာအင်ပါယာပြိုကွဲချိန်များတွင် ရှမ်း (ထိုင်း) မင်းများက မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သည့်သမိုင်းများရှိပါသည်။
အောက်ပါဇယားကိုကြည့်ပါက .. ဦးနေ၀င်း စစ်အာဏာမသိမ်းမီ၊ before 1962 မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးသည် အာရှထိပ်တန်းဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ထိုင်း နိုင်ငံထက် အပြက်သာသည်ပြောဆိုချက်များသည် ဒေတာမပါပဲ၊ လေထဲကလာသောစကားများ၊ စာသားများဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါဇယား အရကြည့်လျှင် ၁၉၆၀ တွင် မြန်မာနှင့်ထိုင်းစီးပွားရေးသည် အတူတူမျှသာဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် ၃ ဆမက တိုးတက် သွားပါသည်။
ကျွန်ုပ်ငယ်စဉ် ၁၉၈၈ အရေးခင်းအချိန်က မြန်မာအစိုးရထုတ်ဝေသော နိုင်ငံတကာစာစောင်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးကို ကြည့်လိုက်သော အခါ လယ်ယာကဏ္ဍသည် ၂၀ ရာနှုန်းပင်မရှိသည်ကို အံ့သြတွေ့ရှိရသည်။ လူပိန်းဘ၀က ကမ္ဘာ့ဆန်အများဆုံးပြည်ပပို့နိုင်သော ထိုင်းနိုင်ငံ သည် လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးကို တိုးတက်အောင်လုပ်သည်ဆိုသည့် ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်မှာ မှားယွင်းကြောင်း သိခဲ့ရ သည်။ ယခုအခါ ထိုင်းလယ်ယာထုတ်ကုန်မှာ အမျိုးသားထုတ်ကုန်၏ ၁၂ ရာနှုန်းသာရှိပါတော့သည်။
လက်ရှိအခြေအနေ အောက်ပါဇယားကိုကြည့်ပါက ထိုင်း-မြန်မာ လူဦးရေ (၆၆သန်း – ၅၃သန်း)၊ GDP (US$ ၆၀၉ ဘီလျှံ – ၈၂ ဘီလျှံ)၊ တဦးချင်းဝင်ငွေ (US$ 9700 – $ 1300)၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းရငွေ (၁၂% – ၄၃%) တို့ကို မြင်နိုင်ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဂျီဒီပီ၏ ၁၂ ရာနှုန်းဆိုသည်မှာ US$ ၇၂ ဘီလျှံ တန်ဖိုးရှိသောကြောင့် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးထွက်ကုန် စုစုပေါင်းဂဏန်းခန့်ရှိနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု FDI တရားဝင်စာရင်းတွင် Shwe Gas by Dawoo, Shwe Oil & Gas pipe (by China), Yadana gas (Total), Garment Industry, Myanmar Dawei (TAVOY), Jade (China), Copper (China), Hydro Electric ,Myitsone & others (China), Fishery (Thailand) .. စသဖြင့်များရှိပါသည်။ ၂၀၁၂တွင် ဗီယက်နမ်ထက်ပင်သာမည်ဟု မှန်းဆလျှက်ရှိသည်။ လက်ရှိ အခြေအနေတွင် မြန်မာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသော ထိုင်း၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယတို့သာမက အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ် စသည့်နိုင်ငံများမှ FDI မဟုတ်သောတရားမ၀င်ဒေါ်လာများစွာဝင်လာသောကြောင့် ကျပ်ငွေဈေးကောင်းလျှက်ရှိပါသည်။ အများဆုံးမှာ ဘောဒါထရိတ် ထိုင်းနှင့် တရုတ်တို့ဖြစ်သည်။ မြန်မာအစိုးရသည် ထိုင်းနိုင်ငံကိုဦးစားပေးသော်လည်း တရုတ်၏အင်အားကြီးမားစွာဝင်လာမှုကို တားဆီးရန်ခက်ခဲနေပါ သည်။
ယခု ၂၀၁၂သို့ရောက်လေပြီ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတိုက်အခံများ၏ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ၏ အသီးအပွင့်ရလာပြီဖြစ် သည်။ ရေရှည်တည်တံ့ရန် စစ်အာဏာရှင်များက ပြည်တွင်းလူငယ်တတ်သိပညာရှင်များနှင့် ပြည်ပမှမြန်မာပညာရှင်များအား နေရာပေးသွား ပါလိမ့်မည်။ စစ်အင်အားသည် နိုင်ငံအတွက်အဓိကကျသောကြောင့် စစ်တပ်ကို နားလည်၊ ဦးဆောင်နိုင်သူသည် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ် ရပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုအခါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတဟုန်ထိုးလုပ်လိုသူအုပ်စုနှင့် အာဏာကို အသေဆွဲကိုင်ပြီး တဖြေးဖြေးလုပ်လိုသူအုပ်စု ၂ ခု အပြိုင်ဖြစ်နေပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသောစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများကိုကြည့်ပါက ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သောအုပ်စုကိုမြင်နိုင်ပေသည်။ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ပူးပေါင်းကူညီလျှက်ရှိသည်။ အကျိုးရလဒ်မှာ ယခု ဧပြီကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ၄၈ နေရာတွင် အင်အယ်ဒီပါတီသည် အရွေးခံမည်ဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရောက်သွားပါက ပြု ပြင်ပြောင်းလဲလိုသူအုပ်စုအတွက် အလွန်အားကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ မကြာမီလက်ဝါးကြီးအုပ်စီးပွားရေးလုပ်ရပ်များ တုံ့ဆိုင်းသွားပါ မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ စီးပွားရေးနမူနာယူရမည့်အဓိကနိုင်ငံမှာ ထိုင်းနိုင်ငံပင်ဖြစ်သည်။ အစစအရာရာသာလွန်နေသော ထိုင်းနိုင်ငံအား ညီအစ်ကိုလို ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားရပါမည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာပြည် နှိုင်းယှဉ်ကာအဆုံးသပ်ပါမည်။
လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသည် မြန်မာပြည်ထက် အဆများစွာသာလွန်နေသည်ကို မြန်မာခေါင်းဆောင်များလက်ခံပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ညီအစ်ကိုနိုင်ငံဖြစ်သည်ကိုလည်း လက်ခံပါသည်။ ရေမြေအနေထားနှင့် ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုများ အတူတူဖြစ်သည်။ တဦးနှင့်တဦးနားလည်သဘောပေါက်ပြီး အတူနေထိုင်နိုင်ပါသည်။ ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံတခုမှာ၊ ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံ ယာဉ်မတော်တဆ မှု ဖြင့် ပါသမျှငွေ၊ ပတ်စ်ပို့၊ စာရွက်စာတမ်းအားလုံးပြန်ကျဲကာ ထိုင်းရွာတခုတွင် ဒုက္ခရောက်စဉ်၊ ထိုင်းရွာသားရာနှင့်ချီပြီးရောက်လာပြီး မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ သယ်ဆောင်ပို့ပေးပါသည်။ ထိုမှတဆင့် မြို့ပေါ်ဆေးရုံကြီးသို့ရောက်ပြီး အဆင့်မြင်ဆေးကုသမှုကိုခံယူကာ၊ အတိတ်မေ့ နေသော ကျွန်တော့ဇနီးသည်သည် နာရီ ၂၀ အကြာတွင် သတိပြန်လည်လာပါခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့လွှင့်ကျနေသော အကြွေတစေ့မကျန် အထုပ်ကလေးနှင့်ထုပ်ပြီး ဆေးရုံတွင်ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်ကကူညီပေးခဲ့သော ချင်းမိုင်မြို့မှ ထိုင်းလူမျိုး ရွာသား၊ မြို့သား၊ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်လျှက်ပင်ရှိ၏။ အချို့မှာ နာကျည်းမှုများကို ရင်ထဲထည့်ကာ ထိုင်းလူမျိုးအလုပ်ရှင်ကို ရှေ့တွင်ရိုသေဟန်ပြ နေခြင်းသည် ညီအကိုစိတ် အစစ်အမှန်မရှိနိုင်သေးခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိကနိမ့်ကျချိန်တွင် ညီငယ်တဦးအနေဖြင့် ဆက် ဆံပါက၊ ထိုင်းလူမျိုးများကလည်း အစ်ကိုနေရာမှ အကူအညီပေးမည်သာဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာအလုပ်လုပ်သော ထိုင်းကုမ္ပဏီအလုပ်သမားများအတွက်မူ မြန်မာများက အစ်ကိုသဖွယ်ပြန်လည်ဆက်ဆံကြပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး၏ ညီအစ်ကိုစိတ်ထားဖြင့် ထိုင်းနှင့်မြန်မာ ၂ နိုင်ငံပူပေါင်းလုပ်ဆောင်ပါက မကြာခင် အရှေ့၊ အနောက်ဂျာမဏီ ၂ ခု ပေါင်းသော စီးပွားစနစ်ကဲ့သို့ မြန်မာ-ထိုင်း ၂ နိုင်ငံပေါင်း စီးပွားရေးသည် အာစီယံတွင်အလွန်ကြီးမားလာမည်မှာသေချာပါသည်။ စစ်တိုက်၊နယ်ချဲ့ကြသောခေတ်စနစ်မဟုတ်တော့ပဲ၊ စီးပွားရေးဖြင့် နိုင်ငံအင်အားတည်ဆောက်နေသည့် စူပါပါဝါဖြစ်လာမည့် တရုတ်၊ အိန္ဒိယတိုးတက်မှုကိုကြည့်ပါ။ အာစီယံလည်း စူပါပါဝါများလွှမ်းမိုးမှုကို စုပေါင်းကာကွယ်ရပါမည်။ အထူးသဖြင့်ထိုင်းနှင့်မြန်မာတို့ အိမ်နီးခြင်း၂ နိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် အားရစဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့်အဖွဲ့ Jan 2012 ထိုင်းနိုင်ငံ ၉ ရက်လေ့လာရေးခရီးသည် အားရဖွယ်ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် မိတ်ဆွေ၊ ညီအစ်ကိုနိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယမှာ ပေါက်ဖော်သာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာခေါင်းဆောင်များသိပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံရေးညီညွတ်မှုမှာ မြန်မာပြည်ထက်စာလျှင် အများကြီးသာပါသည်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင် နယ်မြေနှင့် လူဦးရေသုံးပုံတပုံမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များလွှမ်းမိုးနေမှုသည် အဓိကအခက်အခဲဖြစ်သော်လည်း တရားဥပဒေပြုမှုဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါ သည်။ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရန် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံတတ်သောခေါင်းဆောင်တဦးလိုအပ်ပါသည်။ ထိုခေါင်းဆောင်သည် ဦးသိန်းစိန်လား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လား၊ အခြားတဦးလား.. ဆိုသည်မှာ အချိန်ကအဆုံးဖြက်ပေးသွားပါမည်။ နောင်တချိန် မြန်မာပြည်အလုပ်လာ လုပ်သောသူဌေးအများစုမှာ ထိုင်းကုမဏ္ဍီများဖြစ်လာမည်မလွဲပါ။ ထိုအခါ ညီအစ်ကိုစိတ်ထားထားနိုင်ပါက မြန်မာများသည် အချိန်တိုအ တွင်း ထိုင်းနိုင်ငံလူမှုအခြေအနေများကို ခံစားရမည်မလွဲပင်ဖြစ်ပါသည်။
1. Myanmare new government 2011
2. CIA Fact about Burma & Thailand
3. Ecomomic Paper
4. Myanmar FDI by Reuters
2 Responses to မြန်မာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးလက်ရှိအခြေအနေ
anonymous on February 11, 2012 at 7:18 pm
All this comment ,written by Zaw Aung (Mhone ywah) is correct,and true. Don’t think abour last many many decades,that ,we are higher in everything.Now,it is totally different. Thai is higher in every corner. Their richness, the moral of the people,the characters,the Defence position,and many,many. I am notapro -Thai,but, I am based on reality.Many of our Burmese are working in Thai, and Abroad,because, of the country’s poor situation,and shortage of everything. Our younger,Graduates, Generations are working like Slaves ,with low salaries in Abroad,because of the country’s situation. Only the Generals and their colleagues’s are Rich. Please think with right vision,you will see clearly.
mgkhai on February 12, 2012 at 7:55 am